Nei Vashambadziri Vachida CMS Mune Ravo Rekushandisa Gore rino | Martech Zone
Vazhinji vatengesi munyika yose vari kurerutsa rubatsiro rwechokwadi urwo a Zvemukati Kushambadzira Sisitimu (CMS) inogona kuvapa. Aya mapuratifomu anoshamisa anopa hupfumi hwehuwandu hwakawanda husingawanikwe hwakareba kupfuura kungovabvumidza ivo kungogadzira, kugovera uye kuongorora zvirimo kune bhizinesi rese.
A zvemukati manejimendi system (CMS) ipuratifomu yesoftware inotsigira iyo kugadzirwa uye kuchinjiswa kweiyo zvemadhijitari zvemukati. Zvemukati manejimendi masisitimu anotsigira kupatsanurwa kwemukati uye mharidzo. Zvimiro zvinosiyana zvakanyanya asi zvakanyanya zvinosanganisira web-based kushambadzira, kubatana, fomati manejimendi, nhoroondo yekugadzirisa uye shanduro vhezheni, kunongedzera, kutsvaga, uye kudzosa. Wikipedia
Mune yedu 2016 Nyika Yekushambadzira Technology mushumo isu takaona kuti 83% emabhizinesi ave kushandisa CMS, achiiisa sechikamu chavo chinonyanya kushandiswa chekushambadzira software. Asi, vashambadziri vazhinji vari kurasikirwa neicho chaicho kukosha izvo mapuratifomu anogona kupa kune avo akakura ekutengesa nzira uye ROI.
Tsvagurudzo yedu yakaratidzawo kuti inopfuura hafu yevatengesi vanonetseka kushandisa nekuvimba matekinoroji ekushambadzira anopfuura ekutanga mari (53%). NeCMS kunyanya, pane zvakawanda papuratifomu kupfuura izvo vatengesi vanoziva chaizvo, saka zvakakosha kuti maturusi aya ave kushandiswa kutsigira kugona uye kukurudzira vashambadziri kufunga kunze kwebhokisi.
CMS inoda kugonesa vashambadziri kuti vape zvemunhu zvakasarudzika zviri kuita kune vateereri uye vangangove vatengi, nepo vachipindura zvavanoda uye zvavanoda. Sevatengi vava kutaurirana nemabrands pamhando dzakasiyana dzemidziyo panguva dzakasiyana, muchinjiko -chombo uye kubatanidza chiteshi kwakakosha asi zvinogona kuve zvinonyengera. Yedu 2016 mushumo yakawana kuti pamusoro hafu yevatengesi (51%) unonetsekana kupindura kumatanho matsva kana zvishandiso, zvichiratidza kuti hazvisi nyore nguva dzose kuzvisanganisa muhurongwa hweCMS.
Kuti uwane rwendo rusina musono rwevatengi rwunoita kuti mucherechedzo upe chero chinodiwa nemutengi, pese pavanenge vachichida, vatengesi vanofanirwa kukoshesa zano rezvakawanda. Izvi zvinoda nhanho yakavandudzwa yekunzwisisa, zvichireva kuti vashambadziri vanofanirwa kutanga kudzidzira mukati uye kudzidzira hunyanzvi hwavanoda kuti vakwanise kushandisa nechivimbo chishandiso ichi nezvikonzero zvakanaka. Izvi zvinobvumidza mabhenji kuti azive kukosha kweCMS mukusimbisa nzira uye zvinangwa.
Kuisa Logic kuCMS
Kana webhusaiti yechiratidzo ikasapa ichi chisina musono, chakasanganiswa chiitiko chakabatanidzwa mune zvakasikwa, mukana unozviratidza wega kumutengi kuti atarise kumwe kunhu kana asina kugutsikana nebasa. Tsvagiridzo na Verint uye IDC vakaona kuti iyo dhijitari zera raita kuti zviome zvakanyanya kuti mabrandari abatirire kune vatengi sezvo hunyanzvi hwetekinoroji hunogadzira sarudzo yakawanda uye mukana kune vatengi
Kuchengetedza rwendo rwevatengi rusina musono, zvakakosha kuti CMS ifambe zvakanaka painoshandiswa pamwe chete nemamwe mapuratifomu, senge maCustomer Relationship Management (CRM) masystem. Mutengi anofanira kunge ari pakati pechisarudzo chero chekushambadzira uye izvi hazvisi zvakasiyana kana uchifunga nezve zano reCMS. Zvishandiso zvinofanirwa kuve zvinosanganisirwa pasangano rese kuita nevatengi mune chaiyo-nguva, kushandura vashanyi kuva vatengi vanodzoka uye kubvumidza timu yekutengesa kusimudzira uye kuongorora hunhu hwevatengi. Uku kunzwisisa uye hunyanzvi zvinogona kushandiswa mukati mebhizinesi, kuisa timu yekushambadzira senzvimbo inokosheswa kwazvo yeruzivo kukambani yose.
Mutengi ari kuCentre
Kugona kuendesa zvakagadzirirwa, zvine chekuita nazvo zvinongogoneka kana mutengi ari pakati peiyo CMS zano. Nekuisa mutengi kumberi, vashambadzi vanofanirwa kunyatsonzwisisa kuti ndeapi mhando yezvirimo zvavari kutsvaga. Iyi nhanho yekushandurwa inogona kuwanikwa zvirinyore kuburikidza ne - chigadzirwa ongororo kana kusangana. Ichaputsa ruzivo pane bhizinesi rese, ichibvumidza zvikwata zvakasiyana uye zvikamu kuti vagadzire zvemukati zvinonyanya kukoshesa vatengi vavo uye vanobatika.
Nekutora nzira iyi neiyo CMS zano, iyo inobvumidza iyo yakareba hurefu hwezviri mukati, nekumisikidza izvo zvinofadza kune rinotarisirwa ramangwana, pamwe neazvino. Izvi zvemukati zvemunhu zvinogona kugovaniswa pane rese bhizinesi uye nekunze kune tarisiro nevatengi, pamhando dzakasiyana dzeetekinoroji mapuratifomu. Izvi zvinobvumidza mabhizinesi kushandisa nzira dzese dzavakaisa mari kana vachitaurirana nevashandisi pamatanho ese erwendo rwekutora sarudzo.
­­­­­­­­­­­Ikozvino zvave kukosha kupfuura nakare kese kuti vashambadziri vave nechokwadi chekuti vari kuramba vachiita shanduko mukati mekambani yedhijitari. Ivo vanofanirwa zvakare kuve nekunzwisisa kuzere pavanoshandisa izvozvi uye nyowani maturusi uye mapuratifomu. Mufambiro wevatengi unogara uri muchimiro chekuchinja uye nekushandisa maturusi akatenderedza ipapo, vatengesi vanogona kugara nhanho mbiri kumberi nguva dzese.
Tags: cmscms kusanganacontent managementzvemukati manejimendi systemCRMkuyambuka-chiteshi kusanganamutengi wehutano hwehukamatsananguroidcsquizVerintchiichii chinonzi cms